‘बा’ भनेपछि मख्ख पर्नुहोला कि ? : माधव नेपाल « janaaastha.com
‘बा’ भनेपछि मख्ख पर्नुहोला कि ? : माधव नेपाल
प्रकाशित मिति : १ माघ २०७७, बिहीबार १२:१०
नेकपा (बहुमत) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विध्वंशको प्रतीकको संज्ञा दिनुभएको छ । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित बृहत् कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले ओलीको ध्वंशात्मक प्रवृत्तिकै कारण अहिलेको संकट निम्तिएको बताउनुभयो ।
उहाँलाई बनाउन हैन बिगार्न र भत्काउन मात्र आउँछ’
झापा आन्दोलनदेखि अहिलेसम्म ओलीले ध्वंश मात्रै गरेको भन्दै उहाँले ओलीबाट रचनात्मक कामको अपेक्षा गर्नै नसकिने बताउनुभयो । ‘केपी ओली विध्वंशकारी मान्छे हो । उहाँलाई बनाउन हैन बिगार्न र भत्काउन मात्र आउँछ’ उहाँले भन्नुभयो ।
झापाकालमा त्यहिँ समस्या, को कोअर्डिनेशनकालमा जेल पर्नुभो जेलमै समस्या । जेलबाट आएपछि झन् समस्या ।
ओलीको विगतबारे बताउँदै ‘उहाँले के बनाउनु भएको छ ? झापाकालमा त्यहिँ समस्या,को कोअर्डिनेशनकालमा जेल पर्नुभो जेलमै समस्या । जेलबाट आएपछि झन् समस्या । मदन भण्डारीको निधनपछि त गुट चलाउनु भयो’ उल्लेख गर्नुभयो । अध्यक्ष नेपालले ओलीलाई बयलगाडा सिद्धान्तको प्रतिपादक भन्दै व्यङ्ग्य कस्नुभयो । ‘गणतन्त्रको आन्दोलनमा बयलगाडा सिद्धान्तको प्रतिपादक केपी ‘बा’ नै हो । बा भन्दिए मख्ख पर्लान् कि !’,हाँस्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘नत्र आक्रोश पोख्लान्,गाली गर्लान्’ भन्दै गणतन्त्र,संघीयता,समावेशी,समानुपातिक प्रणाली र धर्मनिरपेक्षताका पक्षमा केपी ओली कहिल्यै दह्रोसँग नउभिएको उहाँको भनाई छ ।
‘केपी ओली संविधानको मूल मर्मको पक्षमा कहिल्यै हुनुभएन । रचनात्मकता कहिल्यै पनि भएन । उहाँ विध्वंशको प्रतीक हो । राम्रो आशा पनि गर्न सकिन्न ।’ उहाँले नागरिक समाज र प्रतिपक्षले आफूहरूलाई साथ दिएको भन्दै केपी ओली एक्लिँदै गएको समेत दाबी गर्नुभयो ।
नेपालले भन्नुभयो ‘उहाँ एक्लिनुभएको छ । तानशाह यसरी नै एक्लिनुहुन्छ । केपी ओली गुटले अगाडि सारेका भ्रमहरूलाई एक एक गरी चिर्नुपर्छ । उहाँको विशेषता नै भ्रम र झुट हो ।’ आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा नेपालले ओलीले लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गर्नुभएको उल्लेख गर्दै आफूहरू कुनै पद प्राप्तिका लागि नभई संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि लागेको बताउनुभयो । ‘ओलीको गुट गलत बाटोमा छ, हामी सही बाटोमा छौं । ओली गुटले फैलाएका भ्रम चिर्न आवश्यक छ । ओली झुटको पुलिन्दा हुनुहुन्छ’ नेपालले भन्नुभयो ।